Asean Road Yekufambisa-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>Our Services>International Road Transport>Asean Mugwagwa Wekutakura
Inoshingairira kupindura "Western budiriro" yeCPC yepakati komiti, "Rimwe Bhandi Uye Imwe Nzira" danho, SHL inoshingairira kugadzirisa hurongwa hwekambani kuronga uye kutanga kupa basa idzva rekufambisa kwemigwagwa yepasi rese kuenda kuASEAN (Sangano reSoutheast Asia Nations).
Migwagwa mikuru yekutakura nzira ndeiyi inotevera:
1. Pingxiang muGuangxi - Vietnam
2. Pingxiang muGuangxi - Vietnam - Cambodia / Thailand / Laos
3. Hekou muYunnan- - lao Cai (Vietnam) - Vietnam
4. Ruili muYunnan - Myanmar
5. Boten muYunan-Laos
Hydropower chiteshi michina, mainjiniya michina, mota crane, forklift, zvekuvakisa, chikafu, hunyanzvi uye hunyanzvi, zvezuva nezuva zvigadzirwa zvinokodzera kune dzimwe nyika nzira yekufambisa kuenda kuASEAN.
Maitiro ekuitisa tsika kuzivisa, kutsikisa tsika uye kubvumidzwa kwetsika kwenzira dzekunze dzemigwagwa kuenda kuASEAN?
A. Yekutakura mumugwagwa kuenda kuASEAN ndeyekuita kuzivisa kwekutumira kunze maererano neruzivo rwakakodzera rwemotokari dzekunze uye tsika dzemuno mushure mekurodha pamotokari dzekunze muSuperised Warehouse.
B. Kufamba kwekufambisa kwemugwagwa kuenda kuASEAN kunoziviswa munyika dziri munzira.
C.International migwagwa yekufambisa kuenda ASEAN inogona kuziviswa pamuganhu chiteshi chetsika clearance kana panzvimbo yeprojekiti.